Muwaadin Soomaali ah oo dil geystay oo lagu maxkamadeyayo dalka Zambia. – idalenews.com
Muwaadin Soomaali ah oo dil geystay oo lagu maxkamadeyayo dalka Zambia.
Maxkamdda Darajdda 1-aad ee magaalladda Ndola ee dalka Zambia, ayaa .waxaa dhawaan la soo taagay Muwaadin Soomaali ah oo lagu magcabo Cumar Maxamed Xaashi, kaasi oo lagu eedeynayo inuu si bareer ah u dilay nin u dhashay dalka Zambia
Garsoore ka tirsan Maxkamadaasi oo lagu magacaabo Ben Akenda, ayaa hadal kooban jeediyey markii ay furantay dacwadaasi, wuxuuna sheegay inaysan Maxkamadiisa qaadi karin Kiiska Eedeysanaha, isagoo xusay inay u wareejinayaan Maxkamadda Sare.
Garsooruhu waxa uu weydiiyey Cumar Maxamed Xaashi inuu la socdo Kiiska loo haysto, iyadoo uu Eedeysnuhu sheegay inuu mar hore arkay Dukumentiga Gal-dacwadeedkiisa.
Dacwadda Kiiskaasi ayaa lagu wadaa in Xilliyadda soo socda dib u dhegeysato Maxkamdda Sare ee dalkaasi, iyadoo loo cuskanayo qoddobka 200 ww Xeerka Ciqaabta ee dalka Zambia.
Dacwadda loo haysto Muwaadinkaasi Soomaliga ah, ayaa waxa uu xiisad ka dhex abuuray dadka Reer Zambia iyo Jaalliyadda Soomaalida, iyadoo Boiliska xakameeyey qalalaasaha ka dhashay arrintasi.
Cumar Maxamed Xaasi, ayaa ku eedeysan inuu bishii December 13th ee sannadkii hore uu dilay Muwaadin u dhashay Zambia, kadib, markii uu dhex maray muran la xiriiray dhinaca dhaqaalaha.
Marxuumka la dilay oo la oran jirey Holland Kabase, ayaa waxa uu Cunto-kariye u ahaa Cumar Maxamed Xaashi, isla markaana uu Adeegaha dalbaday in la siiyo lacagtii mushaarkiisa oo dhamayd K600,000 oo ah Lacagta laga isticmaalo dalkaasi.
Tababare Soomaaliyeed oo kooxda Jaguar FC ee dalka Austrelia keenay kaalinta 2-aad ee Horyaalka